ကံကောင်းလို့ BUS ကားပေါ်မှာ တို့ဆေးမိပြီး လွတ်လာတဲ့ ကျောင်းသားလေး - ThutaSone
ကံကောင်းလို့ BUS ကားပေါ်မှာ တို့ဆေးမိပြီး လွတ်လာတဲ့ ကျောင်းသားလေး
ပရိသတ်ကြီးရေ အားလုံးသတိထားနိုင်အောင် ဒီစာလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်….ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက် ကျောင်းကအပြန် ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ တို့ဆေးမိပြီး ကံကောင်းလို့ ပြန်လွတ်လာတဲ့ အကြောင်းလေးပါ….ဒီအကြောင်းလေးကို ကျောင်းသားလေးရဲ့ အဒေါ်ကခုလို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ဖြန့်ဝေသတိပေးထားတာပါ…
“ဒီနေ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်လေးရေးပြပါရစေ….ကလေးစာပေပွဲတော်သွား ပြန်လာပြီးအိမ်မှာခဏနား ပြီးမီးပူတိုက်နေချိန်မှာဘဲလ်သံကြားလို့ဖွင့်ကြည့်တော့ညီမရဲ့သားTTCမှာကျောင်းတက်တဲ့တူလေးဖြစ်နေတယ် သူကရှစ်တန်းပေါ့…သားရေဘာဖြစ်လို့အိမ်မပြန်လဲမေးတော့ သားခေါင်းအရမ်းမူးပြီးမဟန်နိုင်တော့လို့ကားပေါ်ကအမြန်ဆင်းခဲ့တာသူကခါတိုင်းလည်းလိုင်းကားစီးပြီးပြန်နေကျ သူ့အမေကမှတ်တိုင်မှာစောင့်ကြိုတာအသွားမှာတော့အဖေကဝင်ပို့တာလေ…
ကျောင်းကအပြန်ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်ရောက်တော့မိန်းမတစ်ယောက်အနားကပ်လာပြီးလက်မောင်းမှာစူးကနဲဖြစ်သွားတယ် မကြာဘူးသားလည်းနဲနဲမူးလာတယ်….ဒါနဲ့မေမေကြိုနေတဲ့မှတ်တိုင်ရောက်အောင်မသွားနိုင်တော့ ကြီးကြီးအိမ်မှာဆင်းလိုက်တာတဲ့လေ ကျမလည်းသူ့ကိုမေးတော့ အဲဒီမိန်းမလည်းသူဆင်းတော့လိုက်ဆင်းလာတယ် …. သူလည်းအပြေးအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့တာ လို့ပြောအပြီးမေ့လဲသွားပါတယ်…
လက်မောင်းမှာဆေးထိုးအပ်ရာလေးနီနေပါတယ် …ကျမလည်းသူ့ကိုအမေနဲ့ခဏထား မှတ်တိုင်ကိုဆင်းကြည့် ကလေးပြောတဲ့မိန်းမကိုတွေ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဓါတ်ပုံသာခိုးရိုက်နေရင်း အဲဒီမိန်းမ ရိပ်မိသွားပုံရ ကားပေါ်တက်ပြေးပါလေရော ….အဲတော့မှ ကျမညံ့သွားပြီလို့သိလိုက်ရ မျက်နှာတောင်မပေါ်လိုက်ဘူး
သူ့အမေဆီအကြောင်းကြား ချိန် ကလေးကသတိမရသေး … တော်သေးတယ်လို့ပြောရမလား….အချိန်မီသားလေးကသတိရှိလို့ အဲဒီမိန်းမနောက်ပါမသွားတာ … သူ့အမေကလည်း မှတ်တိုင်မှာ စောင့်တာနာရီဝက်လောက် အချိနလွန်လို့စိတ်ပူနေပြီ …. ဖုန်းကလည်းပါမလာခဲ့ဆိုတော့ဆက်သွယ်မရကိုယ်တိုင်သွား ခေါ်ခဲ့ရ တာ…
အခုဒီအကြောင်းရေးချိန်မှာညီမသူ့သားနိုးလို့ပြန်ခေါ်သွားပါပြီ ….ပြောချင်တာက မိဘများ သိရှိစေဖို့ပါ အခုတလော ကလေးပျောက်မှုများနေလို့ သတိထား ကြဖို့ပါ …..၄၅ မိနစ်လောက် မေ့နေတာခေါ်မရ … သူ့အမေရောက်လာပြီး ဟိုဒီဖုန်းဆက်ပေါ့ စိတ်ပူသွားတာ… ဘယ်တိုင်ရမှန်းမသိ ဟိုမိန်းမ တွေ့ရဲ့သားနဲ့ ဓါတ်ပုံမရလိုက် …စိတ်ပျက် မိပါ၏ သတိထားကြပါမိဘများ ရှင့်…” ဆိုပြီး မျှဝေသတိပေးထားတာပါ…
တကယ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်…တို့ဆေးဆိုတာ ကြီးနဲ့ လူတွေကို လိုက်လံဒုက္ခပေးနေတဲ့ သူတွေကို မိရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာကို အပ်ပေးကြပါ….ပရိသတ်ကြီးတို့ သားသမီးတွေကိုလည်း သတိထားကြဖို့ မှာကြား စောင့်ရှောက်ပေးကြဖို့ ဒီစာလေးပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်…
Source ; Daw Moe Moe Thet
ပရိသတျကွီးရေ အားလုံးသတိထားနိုငျအောငျ ဒီစာလေးကို မြှဝလေိုကျပါတယျ….ကြောငျးသားလေးတဈယောကျ ကြောငျးကအပွနျ ဘတျဈကားပျေါမှာ တို့ဆေးမိပွီး ကံကောငျးလို့ ပွနျလှတျလာတဲ့ အကွောငျးလေးပါ….ဒီအကွောငျးလေးကို ကြောငျးသားလေးရဲ့ အဒျေါကခုလို လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ ဖွနျ့ဝသေတိပေးထားတာပါ…
“ဒီနကေို့ယျတှဖွေ့ဈရပျလေးရေးပွပါရစေ….ကလေးစာပပှေဲတျောသှား ပွနျလာပွီးအိမျမှာခဏနား ပွီးမီးပူတိုကျနခြေိနျမှာဘဲလျသံကွားလို့ဖှငျ့ကွညျ့တော့ညီမရဲ့သားTTCမှာကြောငျးတကျတဲ့တူလေးဖွဈနတေယျ သူကရှဈတနျးပေါ့…သားရဘောဖွဈလို့အိမျမပွနျလဲမေးတော့ သားခေါငျးအရမျးမူးပွီးမဟနျနိုငျတော့လို့ကားပျေါကအမွနျဆငျးခဲ့တာသူကခါတိုငျးလညျးလိုငျးကားစီးပွီးပွနျနကြေ သူ့အမကေမှတျတိုငျမှာစောငျ့ကွိုတာအသှားမှာတော့အဖကေဝငျပို့တာလေ…
ကြောငျးကအပွနျဆငျရတှေငျးမှတျတိုငျရောကျတော့မိနျးမတဈယောကျအနားကပျလာပွီးလကျမောငျးမှာစူးကနဲဖွဈသှားတယျ မကွာဘူးသားလညျးနဲနဲမူးလာတယျ….ဒါနဲ့မမေကွေိုနတေဲ့မှတျတိုငျရောကျအောငျမသှားနိုငျတော့ ကွီးကွီးအိမျမှာဆငျးလိုကျတာတဲ့လေ ကမြလညျးသူ့ကိုမေးတော့ အဲဒီမိနျးမလညျးသူဆငျးတော့လိုကျဆငျးလာတယျ …. သူလညျးအပွေးအိမျပျေါတကျခဲ့တာ လို့ပွောအပွီးမလေဲ့သှားပါတယျ…
လကျမောငျးမှာဆေးထိုးအပျရာလေးနီနပေါတယျ …ကမြလညျးသူ့ကိုအမနေဲ့ခဏထား မှတျတိုငျကိုဆငျးကွညျ့ ကလေးပွောတဲ့မိနျးမကိုတှေ့ ဘာလုပျရမှနျးမသိဓါတျပုံသာခိုးရိုကျနရေငျး အဲဒီမိနျးမ ရိပျမိသှားပုံရ ကားပျေါတကျပွေးပါလရေော ….အဲတော့မှ ကမြညံ့သှားပွီလို့သိလိုကျရ မကျြနှာတောငျမပျေါလိုကျဘူး
သူ့အမဆေီအကွောငျးကွား ခြိနျ ကလေးကသတိမရသေး … တျောသေးတယျလို့ပွောရမလား….အခြိနျမီသားလေးကသတိရှိလို့ အဲဒီမိနျးမနောကျပါမသှားတာ … သူ့အမကေလညျး မှတျတိုငျမှာ စောငျ့တာနာရီဝကျလောကျ အခြိနလှနျလို့စိတျပူနပွေီ …. ဖုနျးကလညျးပါမလာခဲ့ဆိုတော့ဆကျသှယျမရကိုယျတိုငျသှား ချေါခဲ့ရ တာ…
အခုဒီအကွောငျးရေးခြိနျမှာညီမသူ့သားနိုးလို့ပွနျချေါသှားပါပွီ ….ပွောခငျြတာက မိဘမြား သိရှိစဖေို့ပါ အခုတလော ကလေးပြောကျမှုမြားနလေို့ သတိထား ကွဖို့ပါ …..၄၅ မိနဈလောကျ မနေ့တောချေါမရ … သူ့အမရေောကျလာပွီး ဟိုဒီဖုနျးဆကျပေါ့ စိတျပူသှားတာ… ဘယျတိုငျရမှနျးမသိ ဟိုမိနျးမ တှရေဲ့သားနဲ့ ဓါတျပုံမရလိုကျ …စိတျပကျြ မိပါ၏ သတိထားကွပါမိဘမြား ရှငျ့…” ဆိုပွီး မြှဝသေတိပေးထားတာပါ…
တကယျကွောကျဖို့ ကောငျးပါတယျ…တို့ဆေးဆိုတာ ကွီးနဲ့ လူတှကေို လိုကျလံဒုက်ခပေးနတေဲ့ သူတှကေို မိရငျလညျး သကျဆိုငျရာကို အပျပေးကွပါ….ပရိသတျကွီးတို့ သားသမီးတှကေိုလညျး သတိထားကွဖို့ မှာကွား စောငျ့ရှောကျပေးကွဖို့ ဒီစာလေးပွနျလညျမြှဝလေိုကျရပါတယျ…
ပုဂံ ဘုရားတွေ ဖူးဖို့ဆိုပြီးပန်းရောင်းရင်း ပိုက်ဆံ စုနေတယ်လို့အွန်းလိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ရင်းကကူညီ ချင်ခဲ့တာအခုတော့ အဖွားကို ပေးကမ်း လှူ ဒါန်းကန်တော့ နိုင်ခဲ့ပါပြီ
သိန်း ၁၅၀၀၀ ကံထူးရှင် ရှာတွေ့ပါပြီ မွန်ပြည်နယ်ကပါတဲ့